MODA | Article Detail | မိုးရာသီအတွက် အလန်းစားရုံးတက်ဖက်ရှင်များ
မိုးရာသီမှာ လှလှပပ ဖက်ရှင်ကျကျ ရုံးသွားနိုင်ဖို့အတွက်
အခုချိန်ဟာဆိုရင် Stay Home ကာလတွေ အတော်အသင့်လွန်မြောက်လို့ ပုံမှန်ရုံးတက်ရက်တွေဆီကို တဖန် ပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ဒီလို ရုံးတက်ရက်တွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကလည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မိုးတွင်းကာလ ဖြစ်လို့နေပြန်တာကြောင့် မိုးရာသီနဲ့လိုက်ဖက်မယ့်ရုံးတက်ဖက်ရှင်တွေကို ပြန်လည်လေ့လာဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်လို့ဆိုရမှာပါပဲ။ မိုးတွင်းကာလဆိုပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံကမြို့ကြီးအချို့ရဲ့ ရာသီဥတုက ပူချင်လည်းအရမ်းပူ မိုးအေးတဲ့အခါလည်းအရမ်းအေးတဲ့အပြင် ရုံးတွေမှာလည်း Air-con နဲ့နေရတဲ့အချိန်တွေရှိသေးတာကြောင့် ရုံးတက်ဖက်ရှင်တွေဟာ ရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ညီဖို့သာမက ကျန်းမာရေးအတွက်နဲ့ ဖက်ရှင်ကျပြီး စမတ်ဖြစ်နေဖို့ပါ ကြည့်ဖို့လိုပြန်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်လိုဖက်ရှင်အတွဲအစပ်လေးတွေကများ စမတ်ကျလှပပြီး ရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ညီမှူရှိနိုင်မလဲဆိုတာကို လေ့လာရင်း မိုးရာသီမှာ အလန်းဆုံးရုံးတက်ဖက်ရှင်လေးတွေနဲ့ စမတ်ကျကျ ရုံးတက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ကြရအောင်နော်။
1 . Pullover
နှစ်ထပ်သုံးထပ်လည်းမဝတ်ချင်ဘူး ၊ မိုးအေးရင် ချမ်းမှာလည်းကြောက်တယ် ၊ Smart လည်းကျချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Pullover မထူမပါးလေးတွေက မိုးရာသီရုံးတက်ဖက်ရှင်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ အဲဒီလို Pullover လေးတွေကိုမှ စတိုင်လ်Pant နဲ့ပဲဝတ်ဝတ်၊ Jean Pantလေးတွေနဲ့ပဲတွဲတွဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ရိုးရှင်းလှပတဲ့ ရုံးတက်ဖက်ရှင်လေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီး သူများနဲ့မတူပဲ အရမ်းလူကြီးဆန်တဲ့ပုံမျိုးလည်းမပေါက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Cropped Pant လေးတွေနဲ့ တမျိုးဆန်းအောင် တွဲဖက်ဝတ်လို့ရပါတယ်။
မိုးရာသီမှာ စကတ်ဝတ်တာဟာ မှားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှူတစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့် စကတ်အတိုအရှည်ကို မတွက်ဆပဲ ဝတ်မိရင်တော့အများကြီးဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။ စကတ်အရှည်က မိုးအရမ်းသည်းရင် မိုးရေတစိုစိုနဲ့ ခြေသလုံးတွေမှာကပ်ပြီးဒုက္ခရောက်တတ်သလို စကတ်အတိုဝဲဝဲလေးတွေဝတ်မိရင်လည်း လေတိုက်တိုင်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီး ခရီးမရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိုးတွင်းမှာဝတ်လို့အကောင်းဆုံးနဲ့အသင့်တော်ဆုံး စကတ်လည်းဖြစ် ရုံးတက်ဖို့လည်းအဆင်ပြေတာကတော့ ဒူးဖုံးစကတ်လို့အလွယ်ခေါ်ရမယ့် Midi Skirt တွေပါပဲ။Midi Skirt ဟာ လူကြီးလည်းသိပ်မဆန် လူငယ်ဆန်လွန်းရာလည်းမကျပဲ ရုံးတက်ဖို့အတော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အပြင် ခြေမျက်စိရောက်တဲ့ထိအရှည်မဟုတ်တာကြောင့် တော်ရုံမိုးရေစိုမှာကိုလည်းစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ စကတ်အတိုထက်စာရင် အအေးဒဏ်ကိုပိုကာကွယ်ပေးနိုင်သလို စကတ်အရှည်ဝတ်ထားသလောက်လည်း ကရိကထမများတာအမှန်ပါပဲ။
ရှပ်လက်ရှည်အပါးလေးတွေနဲ့ Cropped Pant ဒါမှမဟုတ် အောက်ကားဘောင်းဘီလေးတွေတွဲဖက်ဝတ်တာက ဖက်ရှင်လည်းကျသလို ရုံးတက်အတွက်လည်း အရမ်းကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ရာသီဥတုအပူအအေး နှစ်မျိုးလုံးနဲ့လည်းမျှတသင့်တော်သလို ရုံးမှာလည်း စမတ်ကျကျနဲ့ မိန်းမသိပ်မဆန်ပဲ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်အသွင်ကို ဆောင်နေစေပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ တွေ့ဆုံမှူတွေအတွက်လည်း အပေါ်ကဘာမှထပ်ဝတ်နေစရာမလိုပဲနဲ့တောင်မှ သပ်ရပ်ကျနတဲ့အသွင်ကိုဆောင်နေစေတာမို့ ရွေးချယ်လို့ လုံးဝမမှားတဲ့အတွဲအစပ်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်နော်။
မိုးတွင်းမှာ ရုံးကိုအပြေးအလွှားနဲ့ ထီးကတစ်ဖက် ထမင်းချိုင့်ကတစ်ဖက် မနိုင်မနင်းသွားနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ချမ်းလို့ ၊ဖျားနာမှာစိုးလို့ဆိုပြီး အနွေးအင်္ကျီထူထူကြီးကိုဘယ်သူမှမဝတ်ချင်ကြသလို ရုတ်တရက်မိုးတိတ်သွားပြီး နေချက်ချင်းပူလာတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း အနွေးအင်္ကျီကြီးကိုချွတ်ပြီးကိုင်ထားရမှာမျိုးတွေဟာ အရမ်းကိုကရိကထများတာမို့ အဲဒီပြသနာတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အချက်ကတော့ Cardigan ခပ်ပါးပါးလေးတွေဝတ်ဆင်ခြင်းပါပဲ။ Cardigan အပါးလေးတွေဟာ ရာသီဥတုပူပူအေးအေး ဝတ်ဆင်နိုင်သလို ဖက်ရှင်ကျပြီးလှပနိုင်တဲ့အပြင် နောက်ဆုံးမဝတ်ချင်ရင် ပါလာတဲ့အိတ်ထဲကို ခေါက်ထည့်ထားရင်တောင် ဘယ်လောက်မှနေရာမယူတဲ့အပေါ်ထပ်လေးတွေမို့ မိုးရာသီရုံးတက်ရက်တွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးOutfitတွေထဲမှာ ထည့်ကိုထည့်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cardigan တွေကို ဘယ်လိုဖက်ရှင်ကျကျဝတ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီ Link လေးမှာ အသေးစိတ်ဝင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
5. Blazer နဲ့Jean Pant
ကိုယ့်ရဲ့Work Environment က Meeting တွေ Business Appointment တွေအများကြီးပြေးလွှားရတယ်။ ကိုယ်ကလည်း မြင်လိုက်တာနဲ့ First Impression ကောင်းနေချင်တယ် အရမ်းလည်းစမတ်ကျကျပုံစံကြီးမဝတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ သိပ်မထူမပါးတဲ့ တစ်ထပ် Blazer လေးတွေကိုရွေးချယ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Blazer ကိုမှ ကိုယ်က အရမ်းလူကြီးဆန်မနေချင်ဘူး၊ လူငယ်ပိုဆန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Oversized Blazer မျိုးတွေကို Jean Pant လေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်။ ဒီအတွဲအစပ်ဟာ မိုးရာသီအတွက်လည်းအရမ်းကိုအဆင်ပြေစေသလို လူငယ်မကျ လူကြီးလည်းအရမ်းမဆန်ပဲ သန့်ပြန့်လှပနေစေမယ့် ရွေးချယ်မှူတစ်ခုလို့ဆိုရင်တောင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။
စမ်းချောင်းရောက်ရင် ထိုင်ကြည့်သင့်တဲ့ ဘားဆိုင်ကောင်းကောင်းများ Part 2
ရှောင်ကောကောတွေလို အထာကျအောင် ဘယ်လိုဝတ်ကြမလဲ
အရှေ့တောင်အာရှကို အလည်အပတ်သွားတဲ့ ခရီးသွားတွေအတွက် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ “TravelThrowback” Instagram Effect
ကောင်မလေးနဲ့ Date ဖို့ဆို ဒီ Tips တွေလည်း သိထားမှရမယ်လေ
မိန်းကလေးတွေအတွက် သာမက ယောင်္ကျားလေးတွေအတွက်လည်း Fashion နဲ့ Styling ကအရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာပါပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Professional Life မှာရော၊ Casual Life မှာရော ဝတ်စားဆင်ယင်မှု Smart ဖြစ်ဖို့က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ Personal Relationship Life ကိုအများကြီး မြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လေ။ ကိုယ်က ရုပ်ချောသည်ဖြစ်စေ၊ ရုပ်မချောသည်ဖြစ်စေ ဝတ်စားဆင်ယင်တာက သပ်ရပ်ပြီး Smart ကျနေတယ်၊ Style ကျနေတယ်ဆို စော်ကြည်မှာကသေချာပါတယ်။
အခုလက်ရှိမိန်းကလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း နောက်တိုင်းက Muscular Guy တွေကို ကြွေရတာကတစ်မျိုး၊ ကိုရီယားက အိုပါးတွေကလည်း ပါးစပ်က မချသလို၊ Chinese ရှောင်ကောကောတွေကိုလည်း လက်မလွတ်ချင်ပြန်ဘူး။ အဲ့လိုဆိုတော့ သူတို့ဘာလို ရှောင်ကောကောတွေကို ကြွေကြလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ ရုပ်ရည်ဆိုတာထက် သူတို့ရဲ့ အပြင်အဆင်၊ Styling နဲ့ အနေအထားကာလာ အထာကျတာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။
အဲ့တော့ ရှောင်ကောကောမှ၊ အိုပါးမှ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်လည်း စတိုင်ကျကျ အထာကျကျဝတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် အများကြားမှာ စန်းပွင့်နေမှာ အသေချာပဲလေ။ အဲ့တော့ ကိုယ်ရဲ့ Dress Code ကိုလည်း သေချာပြန်ဆန်းစစ်ပြီး ပြင်သင့်တာပြင်တော့နော်။ အဲ့လိုပြောလို့လည်း ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေလို၊ မော်ဒယ်တွေလိုလည်း အလွန်အကျူးကြီး ဝတ်စရာမလိုပါဘူး။ အောက်မှာ အယ်ဒီတာ ပြောပြထားတဲ့ Tips လေးတွေအတိုင်းလိုက်နာကြည့်ရင် ကောင်မလေးတွေလည်း တဖြည်းဖြည်းကြွေလာမှာအမှန်ပဲနော်။
အဲ့လိုပြောလို့ Shirt အင်္ကျ ီအသစ်ကြီး ဝယ်ဝတ်ရမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ Shirt လေးတွေ၊ Pants လေးတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်လျှော်ဖွပ်ပြီး မီးပူတိုက်ထားတာကိုပြောတာပါ။ တွန့်ကြေနေတဲ့ အဝတ်အစားတွေကသင့်ကို အရမ်း Impression ကျစေပါတယ်။ ဒီတော့ ကောင်မလေးတွေကြွေဖို့ဆို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းသပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်နေအောင်ပြင်ဆင်ထားနော်။
Bold Color/Crazy ကာလာတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ပါ။ Neon ကာလာတွေနဲ့ ကြောင်ကြောင်ကြားကြား Print အဆင်တွေ၊ Graphic ရုပ်ပုံပါတဲ့ T-Shirt တွေက Party အတွက်ကလွဲရင် Date တဲ့အခါမျိုး၊ ကောင်မလေးနဲ့ အပြင်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ဘယ်လိုမှ မလိုက်ဖက်တဲ့ အဝတ်အစား Design တွေပါ။ အဲ့အစား တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် Basic/ Neutral ဖြစ်တဲ့ ကာလာတွေဖြစ်တဲ့ အဖြူ၊ အနက်၊ နက်ပြာ၊ အသားရောင်တို့ကိုသာဦးစားပေးရွေးချယ်ပါ။
Collered Shirt တွေကို လက်ခေါက်ပြီးဝတ်ကြည့်ပါ
ကောင်မလေးတွေ ဆံပင်မြင့်မြင့်လေးဆွဲချည်ထားရင် ကောင်လေးတွေကြွေသလို၊ ကောင်လေးတွေ Shirt ဝတ်တဲ့အခါ လက်လေးကိုခေါက်တင်ပြီး ဝတ်ရင်ကောင်မလေးတွေအရမ်းကြွေကြပါတယ်။ ရှောင်ကောကောတွေ Shirt ဝတ်တာကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း လက်လေးတွေခေါက်တင်ထားကြတာကို သတိထားမိတယ်မလား။
ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်အတွက် Accessories ဆိုတာ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ နေကာမျက်မှန် တစ်လက်နဲ့ လက်ပတ်နာရီ တစ်ခုရှိရင် Smart ကျဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ တခြား Accessories တွေအများကြီး ထပ်ဖြည့်လိုက်တာက ပိုဖက်ရှင်ကျကောင်းကျနိုင်ပေမယ့် သင့်ကို Smart ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ Gentleman ဆန်ဆန်နဲ့ပဲမိန်းကလေးတွေကို ကြွေအောင်လုပ်ပါ။
အပေါ်က အဝတ်အစားကို အပီအပြင်ရွှိုင်းပြီးမှ ဖိနပ်က ညစ်ပတ်ပေရေနေရင်လည်း ကြည့်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ အဝတ်အစားလိုပဲ ဖိနပ်ရဲ့ Neat and Tidy ဖြစ်မှုကလည်း အရေးပါပါတယ်။ ဈေးကြီးတဲ့ ဖိနပ်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ရိုးရိုး Sneaker လေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Leather Loafer လေးပဲဖြစ်ဖြစ် သန့်ပြန့်နေရင် ကောင်မလေးအတွက်သင်က အမှတ်ပြည့်ပါပဲ။
မိုးရာသီမှာ ဖက်ရှင်ကျစေမယ့် အရောင်အတွဲအစပ်များ
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နွေ၊မိုး၊ဆောင်း ဆိုတဲ့ မတူညီတဲ့ ရာသီဥတုသုံးမျိုးနဲ့အတူ တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် မတူညီတဲ့ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းတွေကြားမှာ ရပ်တည်နေကြရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုရာသီအချိန်ကာလမှာ ဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင်ဝတ်ရမယ်ဆိုတာ တော်တော်လေးဦးနှောက်စားတဲ့ ပြသနာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်မို့ Trend ဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်း အရောင်တွေရဲ့စွမ်းအားကိုသာ အဓိကအနေနဲ့ ကောင်းကောင်းအသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီပြသနာတွေရဲ့တစ်ဝက်ကို အလိုလိုဖြေရှင်းပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အများစုက မိုးရာသီဆိုတာနဲ့ စိမ်းစိုအုံ့မှိုင်းတဲ့ သဘာဝကိုတန်းပြီးမြင်ယောင်ကြမှာပါ။ ဒီလိုရာသီဥတုမျိုးမှာ သဘာဝရဲ့ အုံ့မှိုင်းမှူကိုတန်ပြန်နိုင်တဲ့ အရောင်မျိုးတွေဖြစ်သလို သဘာဝတရားရဲ့စိမ်းလန်းမှူနဲ့အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ သစ်ရွက်တွေ ၊ ပန်းပွင့်တွေရဲ့အရောင်တွေကအများကြီး တာသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း အားလုံးသဘောပေါက်ထားပြီးဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့် မိုးရာသီရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမှာ အရောင်ရင့်ရင့်နဲ့ ခပ်မွဲမွဲအရောင်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ရှားဖို့နဲ့ ဘယ်လိုအရောင်တွေကများ ထူးထူးခြားခြား လင်းလက်ပေါ်လွင်ပြီးဆွဲဆောင်မှူရှိနေစေမလဲဆိုတာ သိစေဖို့အတွက် အောက်ကအချက်လေးတွေမှာ တချက်လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
Turquoise ဆိုတဲ့ ကြေးဥစိမ်းရောင်ကတော့ မိုးရာသီနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်သလို နွေးထွေးမှူကိုလည်းပေးနိုင်တယ်လို့ အဆိုရှိကြပါတယ်။ ပြီးတော့ မိုးရာသီအတွက် အရမ်းကို Luxurious ဖြစ်တဲ့အရောင်တစ်ခုလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့က လူအတော်များများကလည်း သူတို့ရဲ့အိမ်ခန်းတွေနဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ကြေးဥစိမ်းရောင် ပရိဘောဂတွေ ၊အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပြီး မိုးတွင်းကာလနဲ့ပသာဒဖြစ်အောင် Decorate လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မိုးရာသီမှာ ဖက်ရှင်ပိုင်းအရ ဆွဲဆောင်မှူရှိရှိနဲ့ ပေါ်လွင်နေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကြေးဥစိမ်းရောင် အဝတ်အစားနဲ့ Accessories တွေကို ရွေးချယ်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်ကတော့ မိုးတွင်းနဲ့လည်း အတော်လေးလိုက်ဖက်သလို လန်းဆန်းအားပြည့်တဲ့ အမြင်ကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတာကြောင့် ရွေးချယ်သင့်တဲ့အရောင်ထဲမှာ ထည့်ကိုထည့်ထားသင့်ပါတယ်။ မိုးကာလရဲ့ စိမ်းလန်းစိုပြည်တဲ့ သဘောတရားကို ဖော်ညွှန်းထားတဲ့အပြင် သဘာဝနဲ့ထပ်တူကျပြီး အေးချမ်းတဲ့ သဘောကိုဆောင်တာကြောင့် အများကြားမှာ မတူကွဲပြားတဲ့ ဆွဲဆောင်အားတစ်မျိုးကို ဖြစ်ပေါ်နေစေမှာပါ။
Warm Tone ထဲမှာပါဝင်တဲ့ အဝါနဲ့လိမ္မော်ကလည်း သူမတူတဲ့ စွမ်းအားကိုယ်စီနဲ့ မိုးရာသီအတွက် အသင့်တော်ဆုံးအရောင်တွေထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ထိုင်းမှိူင်းလေးလံမှူကိုဆောင်တဲ့ မိုးရာသီလိုကာလမျိုးမှာ တောက်ပပြီး နွေးထွေးတဲ့သဘောကိုဆောင်တဲ့ ဒီအရောင်တွေက ဆန့်ကျင်ဘက်ရသကိုပေးစွမ်းပြီး တက်ကြွခြင်းသဘောကိုဆောင်စေတာမို့ အဝတ်အစားအနေနဲ့ရော Accessories တွေအနေနဲ့ပါ အသုံးပြုသင့်တဲ့ အရောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်းသန့်ခြင်းရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုလို့ဆိုရမယ့် အဖြူရောင်ကတော့ ရိုးရာဝတ်စုံတွေမှာသာမက ခေတ်ပေါ်ဝတ်စုံတွေနဲ့အနေနဲ့ပါ အရမ်းကို လိုက်ဖက်လွန်းတဲ့ သဘာဝအရောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူရောင်ကိုအသုံးပြုခြင်းက ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ တက်ကြွနုပျိုခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကို ဆောင်စေတယ်လို့လည်း သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အထူးဂရုပြုရမှာကတော့ မိုးရာသီလို ပေကျံစွန်းထင်းဖို့လွယ်တဲ့ ရာသီဥတုမျိုးမှာ အဖြူရောင်ကို သတိထားပြီးဝတ်ဆင်ဖို့ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ဘောင်းဘီ၊ လုံချည်၊ စကတ်အနေနဲ့ဝတ်ဆင်တာမျိုးထက် အင်္ကျီ နဲ့ Accessories လိုမျိုးတွေကိုသာ အဓိကရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
5. ခရမ်းနဲ့ ပန်းရောင်
ခရမ်းရောင်ကို တော်ဝင်ဆန်တဲ့အရောင်ရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြသလို ပန်းရောင်ကိုတော့ နူးညံ့လှပခြင်းသဘောကိုဆောင်တယ်လို့ခံယူထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနှစ်မိုးရာသီအတွက် တော်ဝင်ဆန်တဲ့ နူးညံ့ခြင်းသဘောကိုဆောင်တဲ့ ဒီအရောင်နှစ်ခုရဲ့တွဲစပ်မှူက အကောင်းဆုံးသောအရာတွေကို ယူဆောင်လာလိမ့်မယ်လို့လည်း ယူဆလို့ရပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ မိန်းကလေးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးလို့ထင်ရပေမဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ ယောကျာ်းလေးတစ်ချို့အတွက်လည်း ဒီအရောင်အတွဲအစပ်ကအလုပ်ဖြစ်တာကို တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အမိုက်စား Scrunchie လေးတွေပါရနိုင်တဲ့ Local Brand တွေလည်းပါတယ်နော်
2020 ရဲ့ အမိုက်စား Trend တစ်ခုကို အမှီလိုက်ဖို့ ဆို Scrunchie လေးတွေက မပါမဖြစ်ထိပ်ဆုံးကပါနေမှာနော်။ 80's / 90's မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေမှာ၊ လက်ကောက်ဝတ်လေးတွေမှာ အမြဲရှိနေတဲ့၊ It-Girl လေးတွေ အမြဲဝတ်ဆင်နေကြတဲ့ Scrunchie တွေက အခုချိန်မှာတော့ Celebrity တွေ၊ Streetstyle Star တွေ၊ Influencer တွေရဲ့ မရှိမဖြစ် Accessories တစ်ခုအဖြစ်ပါနေရာယူလာပါပြီ။ Fashion statement တစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်လာတာမို့ သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း Aesthetic Vibe တွေ၊ VSCO Girl Look တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူဆိုရင်တော့ ခေါင်းစည်းကြိုး Scrunchie လေးတွေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်နော်။
ပြီးတော့ ဆံပင်ရှည်တဲ့သူတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆံပင်တိုတဲ့သူတွေလည်း Scrunchies လေးတွေကို စည်းလို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ Scrunchies လေးတွေနဲ့ Style ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင် Styling လုပ်လို့ရတဲ့ Tips လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်နော်။
ဒီမှာလည်း အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ Scrunchies လေးတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရတဲ့ Local Scrunchie Brand လေးတွေကိုလည်း စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကဲ Scrunchies လေးတွေနဲ့ အထာကျကျ Style ထုတ်ကြည့်ရအောင်
ဆံပင်ကို အရမ်းတင်းတင်းမြင့်မြင့် Ponytail တွေစည်းရတာ ခေါင်းကိုက်တတ်သူဆိုရင်တော့ အခုလိုအနောက်ကို ဒီလို Loose ပုံစံလေးပဲချည်ထားတာက ရိုးရိုးလေးနဲ့ အထာကျပါတယ်။ Plain Outfit လေးတွေ Minimalist ဆန်ဆန် အတွဲအစပ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ Jeans တို့ White Shirt၊ Black Top လေးတွေနဲ့ဆိုပိုပြီး လိုက်ဖက်ပါတယ်။
Ponytail ကတော့ မိန်းကလေးတိုင်း စည်းတဲ့သူတိုင်းကို ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Look ကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ High Ponytail လေးစည်းတာမို့ Bold ဖြစ်တဲ့ Scrunchie လေးတွေဆိုပိုမိုက်ပါတယ်။
Scrunchie ကို တစ်ဝက်လေးစုချည်ထားတာကလည်း 90's Vibe ဆန်ဆန် IT Girl လေးလို မိမိုက်နေစေပါတယ်။ ဒီလိုဆံပင်လေးတွေဆိုရင်တော့ Crop Top လေးတွေ၊ Mini Skirt လေးတွေနဲ့တွဲဝတ်ကြည့်နော်။
ဆံပင်ကို စည်းတာထက် အကုန်အပြာင်သိမ်းရတာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ညီမလေးတွေအတွက် အခုလို Knot Hairstyle လေးတွေက ပိုပြီးလိုက်ဖက်မှုရှိမှာပါ။ အမြင့်လည်းထုံးလို့ရသလို ခပ်နိမ့်နိမ့် Loose ပုံစံလေးထုံးထားရင်လည်း Formal ဆန်ပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။
အားလုံးကြားမှာ Trend ဖြစ်နေတဲ့ Jumbo Scrunchie တွေကလည်း သင့်ရဲ့ ဖက်ရှင်ကို နဂိုထက်ပိုပြီး ထင်ပေါ်သွားအောင် Highlight လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Outfit ကအရမ်းပဲရိုးနေပါစေဦးတော့၊ အဲ့ Jumbo Scrunchie တွေနဲ့ဆို အထာကျပြီးသားပဲ။
Four Degree Studios by Ydn Naing Win
Scrunchie ကိုမှ Fashionable ဖြစ်သလို အထာလည်းကျစေတာကတော့ ခပ်ကြီးကြီး Jumbo Scrunchie တွေပါ။ အဲ့လို ဖက်ရှင်ကျကျ Scrunchie တွေကို ဒီဇိုင်နာ Ydn Naing Win ဆီမှာမှာယူလို့ရပါတယ်။ Plain Color တွေရောင်စုံရှိသလို Size ကိုလည်း ကိုယ်နှစ်သက်ရာ Small၊ Medium နဲ့ Large ဆိုပြီးရှိပါတယ်။
Shop now at https://www.facebook.com/ydn.naingwin
Aesthetic ဆန်ဆန် Print လေးတွေ၊ Pattern လေးတွေနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Scrunchie လေးတွေကို Lara’s Bands မှာ စုံလင်စွာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Collection အသစ်တွေကလည်း အမြဲထွက်နေတာဆိုတော့ TikTok Girls လေးတွေလည်း အကြိုက်ပေါ့။
Shop now at https://www.facebook.com/myatlaratun/
HANA Scrunchies မှာတော့ မိန်းကလေးတိုင်းသဘောကျမယ့် Scrunchie ဒီဇိုင်းလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့အပြင် Ribbon Clip လေးတွေလည်းရှိတာမို့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ အဲ့အပြင် ခေတ်စားနေတဲ့ Organza အသားနဲ့ Scrunchie တွေလည်းရှိပါတယ်။
Shop now at https://www.facebook.com/Scrunchieslover/
Trending ဖြစ်တဲ့ Outfit တွေ၊ Cute Vintage Dress လေးတွေကို ချုပ်လုပ်ပေးတဲ့ Alchemy Clothing မှာလည်း အမိုက်စား Print စုံ Color စုံ Scrunchie လေးတွေကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Shop now at https://www.facebook.com/avantikaoutfits/
ဗိုက်အဆီလေးတွေကို ဖက်ရှင်ကျကျ ဝှက်ကြမယ်
Pandemic ကာလအတွင်းမှာ အများစုသောမိန်းကလေးတွေဟာ Stay Home အနေများလာတာနဲ့အမျှ အိပ်လိုက်စားလိုက် ၊Work from home လိုက် နဲ့ ဗိုက်မှာ အဆီလေးတွေ အနည်းနဲ့အများ စုမိလာပြီး Love Handle လေးတွေ ကိုယ်စီပိုင်ဆိုင်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပုံမှန် Workout လုပ်ဖြစ်တဲ့သူတွေတော့ မပါဘူးပေါ့နော်။ ဒီလို ဗိုက်အဆီလေးတွေကြောင့်ပဲ ရုံးတွေပြန်ဖွင့်လို့ အဝတ်အစားတွေလှလှပပလေးဝတ်ပြီး ရုံးပြန်တက်မယ်လုပ်တဲ့အခါ စိတ်အနှောင့်အယှက်အနည်းနဲ့အများဖြစ်ကြရပြီး ဘာဝတ်လို့ဝတ်ရမှန်းမသိနဲ့ ပြသနာတက်ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ Stay Home ကာလအတွင်း စုဆောင်းထားတဲ့ စုဗူးလေးတွေကို လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီး ပြန်မချခင်မှာ ဘယ်လိုကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်လေးတွေနဲ့ ဖက်ရှင်ကျကျ ကွယ်ဝှက်ဖုံးအုပ်ထားလို့ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို စုစည်းပြီး မျှဝေပေးသွားမှာမို့ တချက်ချင်းစီ သေချာလေးဖတ်ကြည့်ဖို့တော့လိုမယ်နော်။
1 . အလွှာအထပ်ထပ်
လိုက်ကာစလေးတွေချိတ်ထားသလို အလွှာအတွန့်အတွန့်လေးတွေ ၊ အထပ်ထပ်လေးတွေပါတဲ့ အင်္ကျီမျိုးတွေ နဲ့ ရင်ဘတ်နားမှာကြပ်ပြီး အောက်ဘက်ကို အနည်းငယ်ပွသွားတဲ့ အဝတ်အစားမျိုးတွေက ဗိုက်အဆီထွက်ခြင်းကို တော်တော်လေးဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ကောက်ကြောင်းကိုလည်း ပေါ်လွင်သယောင်အမြင်လှည့်စားပေးနိုင်ပြီး ယောင်ယောင်လေးထွက်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဗိုက်အဆီလေးတွေပေါ်ကို လုံးဝအာရုံမရောက်စေနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့။
ခပ်ပြည့်ပြည့်ကောင်မလေးတွေနဲ့ စုဗူးပိုင်ရှင်မမတို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ကတော့ ဒေါင်လိုက်အစင်း အဝတ်အစားလေးတွေပါပဲ။ ဘေးတိုက်စင်းအင်္ကျီအဝတ်အစားတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ ဒေါင်လိုက်စင်းအဝတ်အစားတွေဟာ အရပ်ကိုပိုမြင့်သယောင်ထင်ရစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပိုပြီး ပိန်သွယ်သယောင်ခံစားရစေပါတယ်။ ဒီလိုဒေါင်လိုက်စင်း အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ထားရင် ဗိုက်ထွက်နေမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကို လုံးဝမေ့ဖောက်ထားလိုက်လို့ရပါပြီ ။
3. ပြောင်အင်္ကျီနဲ့ စကတ်အတွန့်
ဗိုက်အဆီရှိနေတဲ့ကောင်မလေးတွေအနေနဲ့ စကတ်ဝတ်ရင်မလှလောက်ဘူးလို့ တွေးထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီအတွေးကအရမ်းဒိတ်အောက်လွန်းပါတယ်။ စကတ်ခပ်ကြပ်ကြပ်တွေဝတ်ရင်တော့ အဲဒါမျိုးကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အတွန့်အတွန့်လေးတွေပါတဲ့စကတ်ကို အပေါ်ကပြောင်အင်္ကျီတွေနဲ့တွဲဝတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အရင်တွေးခဲ့တဲ့ အတွေးကမှားတယ်ဆိုတာ လက်ခံသွားပါလိမ့်မယ်။ အပေါ်ကပြောင်အင်္ကျီကိုတော့ တအားကြပ်တာမျိုးထက် ခပ်မပွတပွလေးထဲကရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။ စကတ်မှာပါတဲ့အတွန့်တွေက အပေါ်ဘက်ကိုစုသွားသယောင် အမြင်ရောက်စေတာမို့ သင့်ရဲ့အဆီစုဗူးလေးကိုဘယ်သူမှသတိထားမိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဗိုက်ဖျောက်ဖို့အတွက် အရောင်ရင့်ရင့်တွေကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မမှားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ပြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Pattern တွေပဲပါပါ အရောင်ခပ်ရင့်ရင့်တွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပြည့်ဝနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအတော်များများကို ကောင်းကောင်းဖုံးအုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီထက်ပိုပြီး ထိရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အရောင်ရင့်ရင့် အကြေသား၊ လှိုင်းတွန့်သား လိုမျိုးတွေကိုသာ ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
5. ပွပွချောင်ချောင်အင်္ကျီနဲ့ ဘောင်းဘီ
ဒီအတွဲအစပ်ကတော့ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်လေးဖြစ်နေစေမှာဖြစ်သလို ဗိုက်စုဗူးလေးကိုလည်း ကောင်းကောင်းဝှက်ထားပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အပေါ်အင်္ကျီတွေကို ကိုယ်ပုံမှန်ဝတ်နေကျထက် တစ်ဆိုဒ်ပိုကြီးတာကို ရွေးချယ်ပြီး အောက်ကနေ Slim Fit ဘောင်းဘီ ၊ Legging ၊ ဂျင်းဆွဲသားလိုမျိုးလေးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အထာကျကျကောင်မလေးတစ်ယောက်လို ခပ်ချေချေလန်းနိင်ပါပြီ။ ဘောင်းဘီရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော့ တတ်နိုင်ရင် ခါးအောက်အကျဘောင်းဘီလိုမျိုးလေးတွေရွေးချယ်ရင် ပိုပြီး လိုက်ဖက်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ Accessories လေးတေပေါင်းစပ်ပြီး အမိုက်စားကောင်မလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ခပ်လန်းလန်းလေး အသွင်ပြောင်းလိုက်ပါ။
Cardigan တွေကို အထာကျအောင် ဘယ်လိုဝတ်ကြမလဲ
ပူချင်ပူ အေးချင်အေး ဖက်ရှင်ကို လုံးဝအလျော့မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် Cardigan တွေက အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ
အခုအချိန်ဟာ မိုးရာသီကိုရောက်ရှိလာပြီမို့ အေးတယ်လို့လည်းဆိုနိုင်သလို တခါတလေ မိုးမရွာတဲ့နေ့တွေမှာလည်း ခြစ်ခြစ်တောက်ပူတတ်တာမို့ အဲဒီလိုရာသီဥတုရဲ့ အပူအအေး ကွာဟမှူအတွက် အသင့်တော်ဆုံးထိန်းညှိပေးနိုင်မယ့် အနွေးအင်္ကျီမျိုးကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့ကလည်း အရမ်းကိုအရေးပါလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ရာသီဥတုမညီမျှမှူအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်မှူကိုပြောပါဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုရာသီဥတုမျိုးနဲ့မဆိုကိုက်ညီတဲ့ Cardigan အပေါ်ထပ်လေးတွေကိုပဲ ညွှန်ပြရမှာပါ။ Cardigan တွေဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သယ်ရလွယ် ဝတ်ဆင်ရလွယ်သလို ဖက်ရှင်လည်းကျတဲ့အပေါ်ထပ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မတော်တဆများ ရွေးချယ်မှူမှားခဲ့ရင် လူကိုပိုပြီးကြည့်ရဆိုးစေသလို ပိုပြီးလည်း အိုစာစေနိုင်တာမို့ Cardigan တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ မှန်ကန်စေဖို့နဲ့ ဖက်ရှင်ကျကျဝတ်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်လေးတချို့ကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် မိန်းကလေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားတာကြောင့် အဝတ်အစားရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ တသမတ်တည်းတွက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုပုံစံ ဘယ်လိုစတိုင်လ်ကတော့ဖြင့် ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ်ဆိုတာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သေချာရွေးချယ်ပြီးဝယ်ယူတာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါကြောင့် Cartigan တွေကိုဝယ်ယူတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်ဘယ်လိုစတိုင်လ်မျိုးဝတ်ချင်တယ် ဘယ်လောက်အရှည်နဲ့လိုက်ဖက်မယ်ဆိုတာကို ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျဝတ်ကြည့်ပြီး ဝယ်ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
Cartigan တွေကို ဝတ်တဲ့အခါမှာ ပွယောင်းယောင်းနဲ့ ခါးပျောက်နေတာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင် အတွင်းကအင်္ကျီ သို့မဟုတ် Dress ကို ကိုယ်နဲ့ Fitting ကျတာကို ဝတ်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်။ အတွင်းအင်္ကျီကို အကြပ် ဒါမှမဟုတ် ခါးနေရာကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ပုံစံမျိုးကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် Cardigan ဝတ်လို့ ခါးပွနေတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးနော်။
Cardigan တွေက အရွယ်စုံနဲ့လိုက်ဖက်သလို လူငယ်တွေအတွက်ပဲ ပိုလိုက်ဖက်မယ့် ဒီဇိုင်းမျိုးတွေလည်းအများကြီးပါ။ဥပမာ အရပ်ရှည်ရှည်သွယ်သွယ် မိန်းကလေးမျိုးဆိုရင် Oversized Cardigan နဲ့ပိုလိုက်ဖက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း ပိုပြီး ခပ်ပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်သယောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တာမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့ များသောအားဖြင့်တော့ Cardigan တစ်ထည်ကိုရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားနဲ့အနီးစပ်ဆုံးတူညီပြီး Fitting အကျနိုင်ဆုံးဖြစ်မယ့် ပုံစံမျိုးကိုရွေးချယ်တာဟာ အများကြီးပိုပြီး ကြည့်လို့ကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
4. ပခုံးနဲ့လက် ပုံကျဖို့
Cardigan တွေဝယ်ရင် အရေးကြီးဆုံးကြည့်ရမယ့်အချက်ကတော့ လက် Fitting ကျဖို့ပါ။ လက်အပွဒီဇိုင်းမျိုးတွေတော့မပါဘူးပေါ့။အကယ်လို့များ ကိုယ်ကခပ်ပြည့်ပြည့်လေးမို့ ကိုယ့်ရဲ့ လက်မောင်းကတုတ်တယ်ဆိုရင်တောင် လက်မောင်းနေရာမှာ Fitting ကျတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးတွေက လက်မောင်းကို ပိန်သွယ်သယောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ပခုံးနဲ့ကွက်တိဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ ပခုံးကျနေတဲ့ Cardigan မျိုးက ကိုယ့်ရဲ့ ရှိရင်းစွဲပခုံးထက်ပို ကျယ်သယောင်အမြင်ရောက်စေတာမို့ ဘယ်မိန်းကလေးကမှတော့ ပခုံးကျယ်ကျယ်ကြီးဖြစ်ချင်ကြလောက်ဘူးထင်ပါတယ်နော်။
ဒီအချက်ကတော့ Cardigan ကိုဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာထက် Cardigan အောက်က အဝတ်အစားကို ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ပိုပြောရမှာပါပဲ။ Cardigan တွေကို နွေးထွေးဖို့နဲ့ ဖက်ရှင်ကျဖို့ဝတ်ဆင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် ခပ်ပါးပါးလည်ထောင်အင်္ကျီတွေ ၊ လည်ဝိုင်းအင်္ကျီတွေနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဆိုပေမယ့် တခါတလေမှာတော့ လည်ဟိုက်အင်္ကျီတွေ Croptopတွေနဲ့လည်း တမျိုးဆွဲဆောင်မှူရှိနေနိုင်တာကို သတိပြုရပါမယ်။ အထူးမှာချင်တာကတော့ အေးလို့ဆိုပြီး Cardigan ပေါ်က လည်စည်းပုဝါထူထူကြီးပတ်ထားတာမျိုး ၊ Cardigan အောက်မှာ ရှပ်အင်္ကျီခံဝတ်မျိုးတွေဟာ ကြည့်လို့လည်းအရမ်းအဆင်မပြေသလို ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းကိုလည်းမပေါ်လွင်စေတာမို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်သင့်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။
‌တောင်းမှာအကွပ် လူမှာအ၀တ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း အ၀တ်အစားဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ Lifestyle မှာ‌ တော်တော်လေးကို အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပါ၀င်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အ၀တ်အစားကို ဖြစ်သလို၀တ်မိတာမျိုးက ကိုယ့်ကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်းနေတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်လိုအထင်ရောက်စေတဲ့အပြင် ကိုယ့်အပေါ်ယုံကြည်မှူလည်းလျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် လူတွေရဲ့ နှာခေါင်းရှူံ့စရာ အတင်းပြောစရာတောင်ဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ အ၀တ်အစား၀တ်တဲ့အခါ သပ်သပ်ရပ်ရပ်စမတ်ကျကျ၀တ်စားတတ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်လေးတွေအတိုင်းလိုက်နာပြီး ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ဆိုးလေးတွေကိုသေချာပြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုဘယ်သူမှ အပြစ်ပြောလို့မရတော့ပါဘူးနော်။
တွန့်ကြေနေတဲ့အ၀တ်အစားဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ First Impression ကို ထိခိုက်စေသလို ပျင်းရိသူတစ်ယောက်လို့လည်းသတ်မှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ အင်္ကျီတစ်ထည်ကိုမီးပူတိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ကော်လာတွေ ၊ဂျိုင်းအောက်ဘက်တွေနဲ့ အနားစွန်းလိုနေရာမျိုးတွေက တော်ရုံသတိမထားမိရင် ဘယ်လောက်တိုက်တိုက် တွန့်ကြေနေတတ်ပြီး ဒီအချက်လေးကိုတော့ အထူးဂရုပြုသင့်ပါတယ်။
အ၀တ်အစားအဖြူရောင်လေးတွေ ၀တ်ဆင်တာဟာ အရမ်းကိုကြည့်ကောင်းပြီး သန့်ပြန့်နေတဲ့သဘောကိုဆောင်ပေမဲ့ အဲဒီအဖြူရောင်အ၀တ်အစားတွေမှာ နေဒဏ်၊ လေဒဏ် နဲ့ လျှော်ဖွပ်တဲ့အကြိမ်ရေတွေကြောင့် လည်ဂုတ် ၊ရင်ဘတ်နဲ့ ချိုင်းအောက်လိုနေရာတွေမှာ ဝါကျင်ကျင်ကြီးတွေဖြစ်နေတာမျိုးကတော့ ကြည့်ရဆိုးပြီး ကိုယ့်ကိုလည်း အထင်အမြင်သေးစေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အဖြူရောင်အ၀တ်အစားတွေ အရောင်ပြောင်းပြီး အဲလိုဝါကျင်ကျင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ သေချာပြန်လျှော်ကြည့်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင် အ၀တ်ဗီဒိုထဲကနေ ဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုပါတယ်။
မိန်းကလေးအများစုအနေနဲ့ ခေါင်းစည်းကြိုးကိုအလွယ်တကူမပျောက်ရှအောင်ရော ဖက်ရှင်တစ်ခုအဖြစ်ပါ လက်မှာ ပတ်ထားတတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုအကျင့်မျိုးသင့်မှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အဲအကျင့်ကို အမြန်ဆုံးဖျောက်ပစ်သင့်ပါတယ်။ ပုံမှန်ထသွားထလာအတွက်ကိစ္စမရှိပေမယ့် စမတ်ကျတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်ကို လုံး၀ရှောင်သင့်တယ်လို့ဆိုပါရ‌စေ။
ဆိုးထားတာ‌နည်းနည်းကြာလို့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကလည်းထပ်ပြီးဆိုးဖို့မေ့နေလို့ ပျက်ခါစပြုနေတဲ့အနေအထားနဲ့ လက်သည်းနီဟာ အရမ်းလည်းရုပ်ဆိုးသလို ကိုယ့်ကိုအပျင်းထူတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်လို့လည်းအမြင်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသစ်ထပ်မဆိုးနိုင်သေးရင်တောင် လက်သည်းဖျက်ဆေးနဲ့ သေချာလေးဖျက်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။
ခဏခဏလျှော်တာများလို့ အရောင်မှိန်နေပြီဖြစ်တဲ့အ၀တ်အစားတွေရှိရင် နှမြောမနေသင့်ပဲ တခြား‌တစ်နေရာရာမှာသာ အသုံးချပစ်သင့်ပါတယ်။ အရောင်မှိန်အရောင်ကျနေတဲ့ အ၀တ်အစားတွေဟာ အပြင်ကို၀တ်ဖို့လုံး၀မသင့်တော်တော့တဲ့အပြင် ကိုယ့်ကိုလည်း လူမြင်မတင့်တယ်စေဘူးဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
Date လုပ်တဲ့အခါ ကောင်လေးတွေမကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ အပြင်အဆင် (၈) ခု
ကိုယ်ကသာ အရမ်းလှနေပြီထင်ပေမယ့် သူ့အတွက်တော့တကယ် Cross ပဲ
Couple တွေအပြင်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် Date တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူနဲ့ Date လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးအများစုကတော့ သူတို့ချစ်သူကောင်လေး သူတို့ကို ကြွေသွားအောင်ဆိုပြီး အဝတ်အစားနဲ့ အလှအပတွေကို အထူးဂရုစိုက်ပြီး ပြင်ဆင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေကသာ အဲ့လို အပီအပြင် ချယ်သပြီးသွားပေမယ့် ကောင်လေးရဲ့ မျက်စိထဲမှာတော့ ဘယ်လို မှလက်မခံနိုင်လောက်အောင် အဆင်မပြေတဲ့ ဖက်ရှင်အတွဲအစပ်တွေရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မမတို့၊ ညီမလေးတို့လည်း ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ဖြစ်စေ၊ အခုမှစ Date မယ့်သူနဲ့ဲဖြစ်စေတွေ့ဖို့သွားတဲ့ အခါ ဒီအပြင်အဆင်တွေကို မပြုလုပ်မိအောင် သတိထားဖို့တော့ လိုမယ်နော်။
အဲ့ဒါမှ ကိုယ့်ကို လည်း Impression မကျစေသလို မြင်မြင်ချင်း သဘောကျမိသွားစေမှာပါ။
အရမ်း Slay လို့ပါဆိုပြီးကျွန်မတို့ အရမ်းစီးချင်နေတဲ့ ဒေါက်မြင့် Heels တွေက တကယ်တော့ သက်တောင့်သက်သာလည်းမရှိသလို ကောင်လေးတွေကလည်း အဲ့လို့ ဒေါက်မြင့်ကြီးတွေစီးရင် မနှစ်သက်ကြပါဘူးတဲ့။ ကောင်မလေးတွေက ဒေါက်မြင့်မစီးလို့ ဘယ်လောက်ပဲပုနေပါစေ ရင်ခွင်မှီအရပ်လေးတွေက သူတို့အတွက်ပိုချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။
ဒါကတော့ အထူးတလည် သတိပေးစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့မို့ အဝတ်အစား အနည်းငယ်တွန့်ကျေတာက ဘာမှပြဿနာမရှိပေမယ့် အခုမှ First Date သွားတွေ့မယ့်သူဆိုရင်တော့ တွန့်ကျေနေတဲ့ အဝတ်အစားတွေက အရမ်း Impression Down ပါတယ်။ တွန့်တာအပြင်တခြားဂရုစိုက်ရမှာက ကိုယ့် Fashion က အရမ်းကြီး ကပိုကရိုမဖြစ်နေဖို့ပါ။ အရမ်းပွတာ၊ ချောင်တာ၊ ကျပ်တာ တွေမရှိပဲ ကိုယ်နဲ့ Fit ဖြစ်မယ့် Outfit မျိုးကို အသားပေးရွေးချယ်ပါ။
အရမ်းတို၊ အရမ်းကျပ်လွန်းတဲ့ Skirt/Dress တွေ
ကိုယ်ကတော့ Sexy ဖြစ်မယ်၊ သူ့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အထင်နဲ့ Dress အကျပ်တွေ၊ Skirt အတိုတွေ ဝတ်သွားပေမယ့် သူ့အတွက်တော့ ဒီဟာက လုံးဝကြည့်ရတာ အဆင်မပြေဖြစ်စေပါတယ်။ Sexy ဖြစ်တာမှန်ပေမယ့် ကောင်လေးတွေအတွက်က ဒီလို အတိုအပြတ်တွေကသူတို့ကို ချစ်မိလာစေဖို့ ပိုပြီး ဖြစ်နိုင်ချေမရှိပါဘူး။
Date သွားမယ့် ကောင်မလေးတွေအတွက် နောက်ထပ်အကြံပေးချင်တာက Outfit အရောင်တွေကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ အရမ်း Vibrant ဖြစ်တဲ့ အရောင်တွေ၊ Neon ကာလာတွေ၊ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့ Pattern/Print တွေပါတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ရှောင်ကျဉ်စေချင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Fashionable Taste ရှိတာကို သူသိအောင်ပြချင်တာမှန်ပေမယ့် အခုလို Date သွားတဲ့ အခါမျိုးမှာတော့ Chic and Minimal ဖြစ်တဲ့ Style လေးတွေနဲ့၊ အရောင်ကိုဆိုရင်လည်း Neutal ကာလာ၊ Pastel ကာလာလေးတွေကိုပဲ ရွေးချယ်လိုက်ပါနော်။
အရမ်း Formal ဖြစ်တဲ့ အဝတ်အစား
တစ်ချို့ကျတော့လည်း Date သွားတွေ့တာကို အရမ်း Nervous တွေ ဖြစ်ပြီး Formal ဖြစ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်သွားလေ့ရှိတယ်။ တစ်ဖက်ကောင်လေးအထင်ကြီးအောင်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် Date သွားတွေ့တာ Interview သွားဖြေမှာမှ မဟုတ်တာ။ အရမ်းကြီး Classic မဖြစ်ပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Style လေးတွေဆို အဆင်ပြေပါတယ်။
Date သွားတဲ့ အခါ မလိုအပ်ဆုံး Accessory တွေထဲမှာ ရှုပ်ယှက်ခက်ပြီး Bling Bling ဖြစ်နေတဲ့ Jewelry တွေက ထိပ်ဆုံးကပါပါတယ်။ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် Jewelry တွေက မျက်စိရှုပ်စေပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အလှကိုလည်း မပံ့ပိုးပေးတဲ့အပြင် မှေးမှိန်သွားစေတယ်။ နားကပ်၊ ဆွဲကြိုး၊ လက်ကောက် Accessory တွေကိုလည်း အကုန်လုံးတစ်ပြိုင်တည်း ဝတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ Platinum Necklace ဆိုလည်း Necklace ပါးပါး လေးပဲဆွဲသွားရင်လည်း လုံးလောက်ပါတယ်။
ဆံပင်ကလည် အရေးကြီးပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ကပိုကရိုနဲ့ ရှုပ်ပွနေတဲ့ ဆံပင်နဲ့ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း ဆံပင်ကို အပြင်အဆင်တွေလွန်ကဲတာမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဆံပင်လေးကို သန့်ရှင်းမွှေးကြိုင်နေအောင် ဖီးလိမ်းလာပြီး ဒီတိုင်းသပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ချထားရင်တောင် ယောင်္ကျားလေးတွေက သဘောကျနေပါပြီ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ဆံပင်ကို တစ်ဝက်လောက်ယူပြီး ရိုးရိုးလေး စည်းထားရင်တောင် ကြည့်ရတာ ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။
ဒီအချက်ကတော့ အဆိုးဆုံး အချက်လို့ပြောရမယ်။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ သဘာဝက နဂိုတည်းက အလှအပကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှ သူကြွေသွားအောင်ဆိုပြီး မိတ်ကပ်တွေကို အများကြီး အထူကြီး လိမ်းသွားတတ်ကြတယ်။ မိတ်ကပ်ကြောင့် မှုန်နေအောင်လှကောင်းလှလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မိတ်ကပ်အရမ်းများနေတဲ့ မျက်နှာကို ဘယ်ယောင်္ကျားလေးမှ မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံးမိတ်ကပ်ကို ပါးပါးကြည်ကြည်လေးနဲ့ Natural ဆန်ဆန်လေးပြင်သွားတာက အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။
#Guys don't like
Oversized အင်္ကျီတွေကို အထာကျအောင် ဘယ်လို၀တ်မလဲ
လူငယ်တွေကြားမှာ Street Style တွေတဖြည်းဖြည်းခေတ်စားလာတာနဲ့အမျှ Oversized အ၀တ်အစားတွေကလည်း ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ပါ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို Oversized အ၀တ်အစားတွေကိုရွေးချယ်၀ယ်ယူတဲ့အခါမှာ Cutting ပိုင်းဟာ အရမ်းစကားပြောပါတယ်။ အရွေးမှားရင် ကြည့်မလှသလို ကွာလတီမကောင်းချုပ်ရိုးချုပ်သားညံ့ရင်လည်း ၀တ်ရတာရော ကြည့်ရတာပါအဆင်မပြေတာကို Oversized အင်္ကျီ၀တ်ဆင်ဖူးသူတိုင်းသိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီလိုပဲ ၀တ်တတ်ရင်အရမ်းအရမ်းမိုက်ပြီး ၀တ်ဆင်ပုံမှားယွင်းရင်လည်း အ၀တ်လှန်းထားသလိုကြီးဖြစ်နေတတ်တဲ့ Oversized Outfitတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ရွေးချယ်မှူမမှားယွင်းစေဖို့အတွက် ဘယ်လိုအချက်တွေကိုကြည့်ပြီး အထာကျကျနဲ့အလန်းဆုံးဖြစ်အောင်၀တ်ဆင်လို့ရမလဲဆိုတာကို စုစည်းဖော်ပြမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Oversized အင်္ကျီဆိုတာ မဟားတရားပွယောင်းနေတဲ့ ဆိုဒ်လွန်အင်္ကျီတွေကို၀တ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ size အတွက်ကိုပဲ Oversized Cutting နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အ၀တ်အစားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒါကို နားလည်မှူလွဲပြီး ဆိုဒ်ကြီးကြီးအင်္ကျီမျိုးတွေ၀ယ်မိမယ်ဆိုရင်တော့ အ၀တ်ကြီးက ကြည့်မကောင်းအောင် ပွယောင်းနေတာမျိုးဖြစ်ပြီး အတော်လေးကြည့်ရဆိုးစေမှာပါ။ တကယ်လို့ပွတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Oversized Cutting မှာပဲ တစ်size၊ နှစ် size လောက်ပိုကြီးတာ ၀တ်ချင်၀တ်လို့ရပါတယ်။
Oversized အ၀တ်အစားတွေကို၀တ်တဲ့အခါ အရမ်းမျက်စေ့နောက်လောက်အောင် ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့ Textureတွေ၊ ဒီဇိုင်း တွေထက်စာရင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ Minimalist ဖြစ်တဲ့ ပုံစံမျိုးတွေက ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှူရှိစေမှာပါ။ Oversized Outfit လိုမျိုးမှာ Texture တွေအရမ်းများသွားရင် အမြင်ရှူပ်ပြီး လူတကာအာရုံစိုက်ခံရသလိုဖြစ်တဲ့အပြင် အခန့်မသင့်ရင် ပန်းချီကားချပ်ကြီးတစ်ခုလမ်းလျှောက်လာသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
တချို့မိန်းကလေးတွေက Oversized အ၀တ်အစားတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုဖုံးအုပ်သွားစေပြီး ကောက်ကြောင်းပျောက်နေစေတယ်လို့ယူဆတာကြောင့် တော်တန်ရုံမ၀တ်ကြပါဘူး။ တကယ်တော့ ၀တ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ Oversized Sweater လို ခပ်ပါးပါးနဲ့အတွင်းကိုဖောက်မြင်ရတာမျိုး ၊ Crop-top လို ခါးနေရာမှာပေါ်လွင်နေစေ‌တဲ့ Oversized အင်္ကျီမျိုးတွေကို ရွေးချယ်လို့ရမှာပါ။ ဒါတင်မက Oversized Tee ကို ဘောင်းဘီ(သို့မဟုတ်)စကတ် ထဲကိုထည့်၀တ်တာမျိုးနဲ့လည်း ခါးနေရာကိုပေါ်လွင်အောင် ဖန်တီးလို့ရပါသေးတယ်။
Oversized အ၀တ်အစားတွေမှာ သူမူရင်းကိုက ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုပေါ်လွင်စေဖို့အ၀တ်အစားမျိုးတွေမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီအပိုင်းကိုတော့ ကြိုမျှော်လင့်ထားလို့မရပါဘူး။ အဓိက,ကတော့ ရှိရင်းစွဲခန္ဓာကိုယ်ထက်ပို၀စေတဲ့အသွင်မျိုးဖြစ်မနေစေတဲ့ Cutting မျိုးကိုပဲရွေးချယ်ရမှာပါ။ Oversized အ၀တ်အစားတွေမှာလည်း သူ့ရဲ့ Shape နဲ့ Structure ရှိတာမို့ အဲဒါလေးကိုသေချာကြည့်ပြီး၀ယ်ဖို့လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်လုံးအလှပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Oversized Blazer နဲ့ အတွင်းက ပုံမှန် Cutting နဲ့ Tee မျိုးလေးတွေတွဲ၀တ်ဆင်နိုင်ပြီး အပွပေါ်အပွဆင့်ဖောင်းဖောင်းကြီးဖြစ်မနေတော့ဘူးပေါ့။
Oversized တွေနဲ့ တွဲဖက်၀တ်လို့ကြည့်အကောင်းဆုံးနဲ့ Safe အဖြစ်ဆုံးကတော့ ဘောင်းဘီအကြပ်တွေပါ ။ အပေါ်အပွ အောက်အပွဆိုတာ ၀တ်တတ်တဲ့သူ ၀တ်နေကျသူတွေအတွက် ကြည့်ကောင်းပေမယ့် မ၀တ်တတ်တဲ့သူဆိုရင် လေထိုးရုပ်ကြီးလမ်းလျှောက်လာသလိုဖြစ်နေမှာမို့ Oversized ကိုခုမှစ၀တ်မယ်၊ သိပ်မ၀တ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ အောက်က Skinny jean၊ Tight လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး၀တ်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။